Ubunkokeli kwezentlalo: Umbutho woBunkokeli base-Indiana | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 27, 2009 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 Douglas Karr
Ngale ntsasa ibiyintsasa emangalisayo echithwe kunye Umbutho woBunkokeli baseIndiana. Akusoloko ufumana ithuba lokuthetha neqela leenkokheli zemfundo, i-gurus yobunkokeli, kunye neenkokheli zoluntu. Abantu abaninzi bajonge kwimibutho yoluntu kunye nemfundo kwaye bakholelwa ukuba abanakuze babambelele kwizifundo ezinje ngeMithombo yeendaba yoLuntu.
Kuvavanyo lweqela ngaphambi kweseshoni:
Iipesenti ezingama-90 zeqela uqhelene neekhompyutha.
Iipesenti ezingama-70 zeqela bezinjalo uqhelene nokubhloga.
Iipesenti ezingama-67 zeqela bezinjalo uqhelene neWebhu 2.0.
Iipesenti ezingama-53 zeqela bezinjalo eyaziwayo kwinethiwekhi yoluntu.
Ekhokelwe nguGeorge Okantey, eli yayiliqela elalibandakanyeka lifuna ukufumana amathuba okuphucula i-ILA kunye nokunyusa amajelo asekuhlaleni kwimibutho yabo. Umbuzo abafuna ukuwuphendula ngulo, "Sinxibelelana njani ngononophelo nomsebenzi wethu, amaxabiso kunye nokudala ikamva elahlukileyo kwimbali yakudala?"
Kwakhona ababekho babekho KwiSithili saseSaint Joseph, IZiko leMithombo yoKhathalelo lweBrown County, Inkululeko Academy, Isisombululo seNkokeli, Ubunkokeli boLutsha kuMzantsi Bend / Mishawaka, Inkqubo yeBhola yeYunivesithi yokwakha iiNkqubo eziNgcono zoLuntu, Ubunkokeli, IZiko leWaycross, Ubunkokeli kwiNqila yaseLa Porte, IZiko lokuFunda ngoXolo, kunye neNkokeli yeYunivesithi yePurdue.
Ngethuba eliza noLuntu lwezeNtlalontle, imibutho yobunkokeli inokusebenzisa amajelo asekuhlaleni:
Ulwazi kunye nokwabelana ngeZenzo eziBalaseleyo (kunye nokwabelana ngokusilela ngokunjalo!)
Ukuqonda imeko eguqukayo yobunkokeli
Indawo apho amalungu anokufikelela omnye komnye
Ukuvumelanisa isigama phakathi kwemibutho yobunkokeli
Yenza iinkqubo ezinokuphindwa
Ukufumana iinkokheli 'zangaphambili' njengesiseko somhlala-phantsi
Indawo yokubonelela nokwabelana ngezixhobo
Indawo yokulima iinkokheli
Indawo yokukhuthaza umsebenzi omkhulu owenziwa yimibutho yobunkokeli
Kuya kuba kuhle ukubona ukuququzelelwa kwezi njongo ngombutho ofana nobuNkokheli base-Indiana! Ndiyakholelwa ukuba imibutho enqongopheleyo yokusebenza kwaye isebenza nzima njengale inokuxhamla ekubeni nale nethiwekhi yenkxaso kunye netekhnoloji isetyenziselwe ukomeleza iibhondi kunye nokwenza lula unxibelelwano.
tags: Inkqubo yeBhola yeYunivesithi yokwakha iiNkqubo eziNgcono zoLuntukublogaIZiko leMithombo yoKhathalelo lweBrown CountyiikhompyuthaInkululeko AcademyUmbutho wobunkokeli baseIndianaIsisombululo seNkokeliUbunkokeli kwiNqila yaseLa PorteUbunkokeliIZiko lokuFunda ngoXoloUbunkokeli beYunivesithi yasePurdueingcwele joseph countyubunkokheli beendaba zentlaloinethiwekhi yokuncokolaIZiko leWaycross2.0 webUbunkokeli boLutsha kuMzantsi Bend / Mishawaka
Ukuloba kwiiLwandle eziSigidi